Ukwenza ukuba wonke umntu azive esekhaya nyhani kufuna isiseko sokuthembana esibekwe phezu kolindelo lombuki zindwendwe olumileyo nasekuziphatheni kweendwendwe. Siye saseka le Mimiselo Yabahlali ukuze silawule indlela yokuziphatha kwaye sibeke imithetho exhasa intsapho yethu esehlabathini jikelele.
Olu luxwebhu olusaqulunqwayo, ekubeni sisaqhubeka siphucula indlela esizihoya ngayo izinto ezifunwa yintsapho yethu. Kodwa ezi zinto zintlanu—ukhuseleko, ukunqabiseka, ukuphathana kakuhle, ukunyaniseka, nokuthembeka—zisengundoqo kwimizamo yethu yokuqiniseka ngokhuseleko neyokwenza abantu bazive bengabalapha. Sisoloko sizama ukuqiniseka ukuba ziyathotyela kwaye ziyenziwa.
Amava akho e-Airbnb aqala xa uzonwabisa. Oku kwenzeka kuphela xa uthemba le ntsapho uze uzive ukhuselekile. Ngenxa yoko, sifuna ukuba uphephe ukubeka engozini okanye ukugrogrisa nabani na.
Ukwenzakalisa wena okanye abanye
Awufanele ubethe mntu okanye umnyanzele ngokwesondo, umxhaphaze ngokwesini, wenze ubundlobongela basekhaya, ukuphanga, ukuthengisa abantu, nezinye izenzo zobundlobongela, okanye ubambe nabani na ngaphandle kwemvume yakhe. Amalungu emibutho eyingozi, equka abanqolobi, amaqela olwaphulo-mthetho, kunye namaqela anobuhlanga aphula umthetho, awamkelekanga kule ntsapho. I-Airbnb izibophelele ekusebenzisaneni namapolisa ngokufanelekileyo nokuphendula kwizicelo ezisemthethweni zamapolisa.
Sikujonga nzulu ukuzibulala, ukuzenzakalisa, iingxaki zokutya ngokufanelekileyo, kunye nokukhotyokiswa ziziyobisi yaye sizama iindlela zokunceda abantu abanale ngxaki.
Ukugrogrisa nabani na
Akumele uchaze injongo yokwenzakalisa nabani na enoba kungamazwi akho okanye ngezenzo zakho. Sikwakuthatha nzulu ngokufanayo ukugrogrisa ngokuzenzakalisa nezenzo zako yaye singangenelela ukuba siyayazi lo nto.
Ukudala iimeko eziyingozi
Akufanele ugcine izixhobo ezingakhuselekanga, ingozi yezifo, okanye izilwanyana eziyingozi endlwini yakho, yaye akufanele wenze iimeko ezenza kubekho umlilo, okanye zithintele indawo yokubaleka xa kukho imeko yongxamiseko.
Amalungu entsapho yethu yakwa-Airbnb ashera amakhaya awo, iindawo ahlala kuzo, nezinto zawo. Enoba uvula indawo yakho njengombuki zindwendwe okanye uye wabukwa njengondwendwe, umele uqinseke ukuba uza kuziva ukhuselekile. Siyakucela ukuba uhloniphe indlu, inkcazelo nezinto zabantu.
Ubusela, ukonakalisa okanye ukuphanga
Awumele uthathe izinto ezingezo zakho, usebenzise indlu yomnye umntu ngaphandle kwemvume, ukope iizitshixo kunye nezazisi, wonakalise indlu yomnye umntu, uhlale endlini naxa ixesha lakho olibhukishileyo liphelile okanye ugrogrise ngokuthetha kakubi okanye enye indlela yokohlwaya okanye ukwenzakalisa ukuze ufumane intlawulo okanye ezinye iinzuzo.
Yintoni iPolisi Engokukhuthuza Ka-Airbnb?
I-spam, i-phishing, okanye ubuqhetseba
Awufanele ubhatale ngenye indlela ngaphandle kwenkqubo yokubhatala ka-Airbnb; wenze ubuqhetseba bokubhukisha, ubuqhetseba bekhadi lekhredithi, okanye usebenzise imali yolwaphulo-mthetho; uzame ukusa abantu abangena kwisayithi yethu kwezinye iisayithi okanye ubathengisele iimveliso ezingadibenanga nathi; ukuthatha iintlawulo eya ebantwini uyise kwenye indawo; ukusebenzisa kakubi inkqubo yethu yokumema; okanye ukuxoka ngamanye amalungu entsapho.
Ukunyhasha ukugcinwa kweemfihlo zabantu okanye amalungelo abanawo ngezinto zabo
Awufanele ukrobe abanye abantu; iikhamera azivumelekanga kwindlu yakho ngaphandle kokuba zichazwe ngaphambili kwaye ziyabonakala, kwaye azivumelekanga kwiindawo zangasese (ezifana namagumbi okuhlamba okanye iindawo zokulala). Awufanele ungene kwii-akhawunti zabantu ngaphandle kokugunyaziswa okanye unyhashe ilungelo labanye lokugcina iimfihlo, lee-copyrights, okanye leempawu zokuthengisa zabo.
Intsapho yakwa-Airbnb esehlabathini jikelele inabantu abangafaniyo, yahlukile, kwaye idlamke njengeli hlabathi lisingqongileyo. Into esigcina sikunye kukuphathana kakuhle, kwenza sikwazi ukuthembana, sihlale kakuhle nabamelwane bethu, kwaye sizive singabalapha.
Ucalucalulo okanye amazwi abonakalisa inzondo
Kufuneka uphathe wonke umntu ngentlonipho kuyo yonke into oyenzayo. Ngoko, kufuneka ulandele yonke imithetho esebenzayo kwaye ungaphathi abanye ngokwahlukileyo ngenxa yebala, ubuhlanga , imvelaphi yesizwe, inkolo, ukuba bathanda esiphi isini, isini, indlela abazibona ngayo ngokwesini, ukuba nesiphene okanye ikugula kakhulu. Ngokufanayo, ukuthuka abanye ngenxa yezi zinto akuvumelekanga.
Yintoni iPolisi Ka-Airbnb Yokungacaluli?
Ukuphatha kakubi okanye ukuxhaphaza abantu
Awufanele unikise ngeenkcukacha zabantu ukuze ubahlazise okanye ubanyanzele ukuba benze into, uziphathe ngendlela abangayifuniyo, ungcolise amagama abo, okanye wophule imithetho esiyibekileyo yokubhala izimvo neyekhontenti.
Ukuphazamisa intsapho ekufutshane
Awumele uphazamise iindawo zoluntu, uphathe abamelwane ngathi "ngabantu obaqeshileyo" uze ukruqule kakhulu bonke abantu abakwindawo okuyo, okanye usoloko ungaziphenduli izinto ezixhalatyelwe ngabamelwane okanye abantu basekuhlaleni.
Xa ukhe wasebenzisana no-Airbnb kufuneka kube mnandi kwaye udibane nezinto obungazilindelanga. Ekubeni intsapho yethu yakhelwe phezu kokuthembana, ukunyaniseka kubalulekile—kufuneka nibe nolindelo olufanayo, nisebenzisane ngokunyaniseka, nibe neenkcukacha ezichanileyo.
Awufanele uxoke xa usinika igama nomhla wakho wokuzalwa, usebenzise indlu ngeenjongo yezorhwebo ngaphandle kwemvume yombuki zindwendwe wakho, wenze imicimbi okanye iipati ngaphandle kwemvume yombuki zindwendwe wakho, ube neeakhawunti ezininzi, okanye uvule iakhawunti ukuba uneminyaka engaphantsi kwe-18.
Ukungathethi nyani ngezindlu zakho
Awumele unikezele ngonkcazelo yendawo engachananga, uxoke ngokufumaneka, uqhathe abantu malunga nohlobo, okanye iinkcukacha zendlu yakho, utshintshe indlu ngenye okanye uyile izindlu zobuqhetseba okanye ezingekhoyo, ushiye izimvo ezingekhoyo, ubeke amaxabiso akhohlisayo okanye usilele ukuchaza iingozi neengxaki mayela nokuhlala kwindlu.
Izinto onokuzonwabela ezilushishino kuphela
I-Airbnb yaqala njengendlela yokuvumela abantu ukuba babelane ngamakhaya abo. Nangona i-Airbnb ikhula ukususela kwakwiintsuku zayo zokuqala nokwabelana kwekhaya kwande kulo lonke ihlabathi, silindele ukuba zonke izindlu zingabi yinto yokwenza imali, kunoko zibe yindawo yokuba abanye bazive bequkiwe.
Yonke into onokuzonwabisa ngayo kwi-Airbnb ikhethekile yaye khaya ngalinye linenkcukacha ekhetheke kulo, indawo elikuyo kunye nombuki zindwendwe. Ekubeni intsapho yethu isenza izibophelelo ezisekelwe kwezi nkcukacha, kufuneka sikwazi ukuthembela omnye komnye—enoba kukuqhagamshelana kwangethuba, imeko yendlu, okanye ulindelo esinalo.
Ukubonelela ngeendawo ezingahlalekiyo
Awumele unikise ngeendawo ezingacocwanga kakuhle okanye ezingachazwanga ukuba azinawo amanzi okanye umbane Awumele unikise ngeendawo ezingenazo iindawo zokulala ezifanelekileyo (umzekelo, izinto zokukhempisha), ezingazukuba lapho de kuphele ixesha lokuhlala (umzekelo, izikhephe), okanye ezingenazo izindlu zangasese (umzekelo, ezibonisa apho zikhoyo izindlu zangasese).
Ukwaphula izinto obuzibophelele kuzo
Ngaphandle kweemeko ongenakuzinceda, akumele urhoxe emva kosuku olubekwe kumthetho wokurhoxa. Akumele usilele ukubhalisa xa ufika, usilele ukubhatala okanye wophule imithetho yekhaya lombuki zindwendwe.
Awumele usoloko ufumane izimvo ezimbi okanye eziphantsi, ungaphenduli xa kubhukishwa okanye xa kufike iindwendwe, usilele ukunikezela ngenkcazelo yomntu ekumele kuqhagamshelwane naye xa kubukwa iindwendwe, okanye wale ukuba yinxalenye yenkqubo yokucombulula ingxaki.